Dagaal Ka Dhacay Gudaha Degmada Diinsoor Ee Gobalka Baay. – Calamada.com
Dagaal Ka Dhacay Gudaha Degmada Diinsoor Ee Gobalka Baay.
calamada September 4, 2018 1 min read
Ciidanka mujaahidiinta jabahada wilaayada baay iyo bakool ayaa xaley weerar xoogan ku qaadey fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin gudaha dgmada Diinsoor ee wilaayada baay iyo bakool.
Dagaalkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana la isku weedaarsadey hubka nocyadiisa kala duwan ayaa qaatay ku dhawaad muddo saacad ah, waxaana uu sababay khasaare kala duwan oo soo gaaray maleeshiyaatka murtadiinta.
Mujaahidiinta ayaa si gaar ah u weeraray saldhigga maleeshiyaatka murtadiinta ay ku leeyihiin dhanka bari ee magaalada waxaana usuura gashey in ay jiiraan difaacyada murtadiinta, islamarkaana halkaas ku dilay tiro ka tirsan murtadiinta.
Inta la xaqiijiyey ugu yaraan saddex askari oo ka tiran murtadiinta ayaa lagu dilay weerarkaas, waxaana lagu dhaawacay afar kale sida ay Idaacadda Islaamiga Andalus u xaqiijiyeen saraakiisha Mujaahidiinta Jabhadda Baay iyo Bakool.
Geesiyadii fuliyey weerarka ayaa saaka salaaddii subax ka dib dib uga soo gurtay magaalada iyagoo badqaba ka dib markii ay howlgalkooda u soo guteen sidii loo qorsheeyey.
Weerarkan lagu qaadey xerada maleeshiyaatka murtadiinta ee degmada Diinsoor ayaa qeyb ka ah weeraro joogta ah oo Mujaahidiinta Baay iyo Bakool ay ku beegsadaan cadowga Allaah ee duullaanka ku jooga deegaanada wilaayadaasi.
maalin ka hor ayey aheyd markii Mujaahidiinta ka howlgala wilaayadaasi ay weerar dhabagal ah u dhigeen maleeshiyaat ka tirsan murtadiinta oo damacsanaa in ay dhac iyo arbushaad ka geystaan deegaanada hoos yimaada degmada Diinsoor, kaas oo lagu dilay ugu yaraan saddex askari laguna dhaawacay ilaa lix kale.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 24-12-1439 Hijri.
Next: Dad Badan Oo Ku Dhintay Dagaallo Ka Socda Dalka Liibiya.